ဘာကြောင့်တရားအားထုတ်တာလဲ? – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
စိတ် အေး ချမ်းသာ ချင်လို့ ပါ… ဘယ်နည်း နဲ့ အားထုတ် အားထုတ် စိတ် အေး ချမ်းသာ သွား တယ်ဆို လိုရင်းရောက်ပါပြီ… နည်းစနစ်က အဓိက ကျသလား? မိမိမှာ တရားအားထုတ်တက် တဲ့ စနစ် တခုရှိနေ ပြီးသားဆိုလျှင် မလိုပါဘူး. တရားအားထုတ်တာ သမာဓိ ရှိလာအောင် လုပ် ပြီးမှ ဝိပဿနာ အားထုတ်ခြင်း ကြောင့် သမာဓိ အကြောင်း တော့ အနည်းငယ် ဗဟုသုတ ရှိထား သင့်ပါတယ်. တရားအား ထုတ်လျှင် အခြေခံ သိသင့် သိထိုက် သည်များကို သိထားပြီး မှ အား ထုတ်လျှင် ပို၍ လွယ်ကူမြန် ဆန်ပါသည်။ အခြေခံ သိသင့်သည် ဆိုသော အရာများထဲမှ တချို့ ကို ဥပမာ အဖြစ် ဖော်ပြပေး ပါမည် ။ ကိလေသာ ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲ? သမထ ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာ လဲ? သမာဓိ ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာလဲ? ဝိပသနာ ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာလဲ? စသော အခြေခံ လေးများကို မိမိတို့ လက်လှမ်း မှီသလောက် လေ့လာမှတ် ထားသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ မိမိ သွားနေသော ခရီးက ဘယ် ကို သွားနေတာ ဘာယာဥ်စီး ပြီးသွားနေတာ ကိုယ်စီး တဲ့မြင်း အထီး အမသိတော့ ပို၍ကောင်းသည်ပေါ့.. စာရေးသူ အားထုတ်သော နည်းနှင့် မိမိတို့ ၏ စရိုက် သဘာဝနှင့် ကိုက်ချင်မှ ကိုက်ပါလိမ့်မည် သို့ကြောင့် လိုရင်းရောက်ဖို့အဓိက ပါလို့.. မိမိက ဘယ် စရိုက် သဘာဝရှိ သူလဲ? ဘာကို ကြိုက် သူလည်း စ သော မိမိ ၏ စိတ် သဘာဝ ကို မိမိ ကိုယ်ကို ဝေဖန် စမ်းစစ် ကြည့် ပါလို့…. ဥပမာ ဆိုကြ ပါစို့ စာရေး သူ ၏ စရိုက် သဘာဝလေးကို ပြောပြ ကြည့်မယ်နော်..စာရေးသူသည် အလွန် ပျင်းပါသည် လောဘအလွန် ကြီးသူ ဒေါသ အလွန်ကြီးသူ မာန အလွန် ကြီးသူ ဝီရိယ နည်းသူ ဇွဲ မရှိသူ ထိုစရိုက် များ အခြေခံပိုင်ရှင်မို့အရမ်းခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရသောအရာများကို လုံးဝ မနှစ်သက် ပါ. ထို့ကြောင့် မိမိနှင့် ကိုက်ညီလောက်မည့် စနစ်ကို အမြဲရွေးလေ့ရှိသူပါ.။
စာရေး သူ ယခု လက်ရှိ အားထုတ်နေ သော နည်း စနစ်သည် မြေဇင်း နည်း စနစ် ဖြစ်ပါ သည် တနည်း ဘုရား နည်းဖြစ် ပါသည်…. ထို မြေဇင်း နည်း စနစ်တွင် ထူးခြား သည့် အချက် တခုက နိမိတ် ရ အောင် လုပ် ပြီး သမာဓိ ထက် စေရန် ဘုရားများ ဖူးခိုင်း ပြီးမှ ဝိပသာနာ ဘက်ကို ကူးရ သောနည်းစနစ်မို့ နိမိတ်ရအောင် သမာဓိ ထူထောင် ရပါသည်။ ဤတွင် အနည်းငယ် စာရေးသူ ပြောချင်သော အရာများကို ထည့်ပြောပါတော့မည်။ နိမိတ်ရတဲ့သူရှိသလို မရတဲ့သူ ရှိပါသည်။ ဒီနေရာတွင် စာရေးသူ ကတော့ ထင်ပါသည် မရသူသည် မိမိ ကိုယ်ကို ရတာ မသိခြင်းနှင့် ဝီရိယ မတင် ခြင်း ဆိုသော အကြောင်း ၂ချက်ကြောင့်သာ မရသူ ရှိပါ မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် နိမိတ် အမျိုး အစား များ ကိုလည်း လေ့လာ သင့်ပါသည်။ စာရေးသူ တုန်းက မိမိရနေတာမသိ၍ နောက်မှ အော်.. ဒါကို နိမိတ်လို့ခေါ်တာပါလားဆိုတာသိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဒါမျိုးလည်း စာသိ သိထား သင့်ပေသည်။ နောက် တခုက နိမိတ်ဖြင့် ဘုရားဖူး နိုင်တဲ့သူ မဖူးနိုင်တဲ့သူ.. ဖူးနိုင်တဲ့သူ သည် စိတ် ကို အပို့ အယူ လုပ်တက် သူပါ…. စိတ်သည် နိမိတ် ပါ…. နိမိတ် သည် စိတ် ပါ။ ဤ အကြောင်းအရာကိုဖားအောက် ဆရာတော်ဘုရားကြီး နိမိတ်အကြောင်းရှင်းပြထားသော video များကို သေချာနာယူ၍လည်း မှတ်သားသိရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ အချက် များတွင် နိမိတ် ကို ဘာကြောင့် ရအောင် လုပ်ရပါ သနည်း ဆိုသည့် ရည်ရွယ် ချက်များ ပါရှိသွားပြီမို့… နိမိတ်ရလာပြီဆိုတာနဲ့ သမာဓိ ရလာတာပါပဲ.. သမာဓိ ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ မိမိက စျာန်နဲ့ နေချင်ရင် နိမိတ်ထဲ ဘာဝနာစိတ်ကို မြဲနေအောင်ကပ်ထားရုံပါဘဲ.. အဲ့လို ကပ်ထား လိုက်ရင် ကပ်နေတဲ့အချိန် ကိလေသာ မဝင်ရင် စိတ်ချမ်းသာ နေတာပေါ့.. ဒါလေးက တနည်း.. သမထ ထူထောင်ပြီး သမာဓိ ရလာပြီး တာနဲ့ ဝိပဿနာ ဘက်ကို ရှုမယ် ဆိုရင် လည်း ရတာပါဘဲ… ဒီနေရာမှာ မိမိတို့ စိတ် မိမိတို့ စရိုက် မိမိတို့ ဉာဏ် ရှိသလောက် မိမိတို့ ကြိုက်ရာ ကို ရှုနေယုံပါဘဲ… ဒီတော့ နိမိတ် မရရင်ကော မေးစရာရှိပါတယ်.. မရလည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါ ဘူး….အဓိက မိမိ စိတ်ကလေး တနေရာ ထဲမှာ ကြာကြာ တည် နေအောင် လုပ်နေ နိုင် တဲ့ အချိန် တခဏ လေးမှာ ဘာကိလေသာမှ မဝင်ရင် ပြီးတာပါပဲ..ကိလေသာ မှ မဝင်ရင် စိတ်က ချမ်းသာ နေပြီဘဲ… အာနာပါန ရှုနေ တဲ့ စိတ်ကလေး ကိုက အတွေး မဝင် ဘူးဆို ချမ်းသာ နေပါ ပြီ… အဓိက စိတ်ဆင်း ရဲတာ ကိလေသာ ကြောင့်လေ…. ဒါကြောင့် နိဗ္ဗာန် ဆိုတာ ဘယ်မှာ လဲ? ကိလေသာ ကုန် တာ နိဗ္ဗာန် ပဲ လို့ ဟော ထား တာ ပါ….. ဒီ တော့ ဒီ လို တဒဂ် လေး ခဏ ခဏ ကိလေသာ တွေ ရပ်သွား အောင် အားထုတ် နေချိန် လေးတွေ များလာ တော့ ကြာလေ ကြာလေ စိတ်က ပိုပို ကြည်လာ ပြီပေါ့… ဒလောက် အဆင့် လေးလောက် ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်ကိုပဲ အတော် ဟုတ်လှပါပြီ… လောကကြီး ဒုက္ခ ရောက် စိတ်ဆင်းရဲ နေကြ ရတာ ဒီ ကိလေသာ တွေကြောင့် လေ…။
သူ့ကို မဝင်အောင် ခဏ လောက် ရပ်ထား ၊တားထား နိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ ဟုတ်လှ ပါဘီ… ဒါ ကြောင့် သူ့ကို မိမိ စိတ်ထဲ အဝင် မခံ ၊ ဝင်တာနဲ့သိ ၊ သိတာနဲ့ ရပ်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့က အဓိက ကျ သည် မဟုတ် ပါလော။ ဒါကြောင့် ဘယ်လို ဘာကြောင့် ဖြစ် ဖြစ် လိုရင်း ရောက်ဖို့ က အရေး ကြီးတာ ပါလို့.. နိမိတ် မရလို့ ဘုရား မဖူးရဘူး..စိတ်ပျက် တယ်တို့ နိမိတ်မပို့တက်လို့ စိတ်တို တယ်တို့.. အားမ ရဘူးတို့.. နိမိတ်ကို ဘယ်လို ပို့ရ တာတုန်း တို့… နိမိတ်က ခုထိ မရ သေဘူး တို့… နိမိတ်က မလင်း ဘူးတို့.. စသောစသော နိမိတ်ကို အကြောင်း ပြုပြီး မိမိစိတ် မှာ ကိလေသာ ပြန်ဖြစ် နေတာဟာ.. မဖြစ် သင့်ဘူး မဟုတ်ပါလော… နှာသီး ဖျား စိတ်ထား လို့ မရဘူး… စလေ့ကျင့်ခါစမှာ ဘယ်လို စိတ်က ငြိမ် နိုင်ပါ့မလဲ.. စဥ်းစား ကြည့်ရအောင်…. တနေ့ ကို ၂၄နာရီ ရှိတဲ့ အထဲမှာမှ နှာသီးဖျား စိတ်ကလေး ထားတဲ့ အချိန်က ဘယ်နှစ်မိနစ်များ ရှိနေ လို့ တုန်း…နော် ဒါကြောင့် စစ ချင်းတော့ ရေထဲကငါး ကုန်းပေါ် တင်သလို ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး… နော်.. ဒါဟာလည်းသဘာဝပါ…လို့ဒါကြောင့် ဒီတောင်ကိုကျော်ဖို့ဆိုရင်…ယောဂီ ဟာ စကားနည်း ရပါမယ်၊ ဘာရိယ ကိစ္စ နည်းပါး ရ ပါမယ်… မိမိက အာနာပါန ကမ္မဌာန်း အားထုတ် နေသူ ဆိုရင် တော့ လျောင်း၊ ထိုင်၊ ရပ်၊သွား ဣရိယပုတ် ၄ပါးလုံးမှာ သတိကို နှာသီးဖျား မှာပဲ ထားရပါမယ်.။
ရေချိုးလဲ နှာသီး ဖျား ၊ Toilet ဝင်လည်း နှာ သီးဖျား၊ ထမင်း စားလည်း နှာသီး ဖျားပဲ စိတ် ကို ထားနေ ရမှာပါ ။ ဒါမှ မြန်မြန် သမာဓိ ရမှာပါ…. ရလာလို့ လေပျောက် သွားပြီဆို လေ ကို လိုက်မရှာ ပါနဲ့ စိတ်ကို နှာသီးဖျား ပဲ ထား နေရ မှာပါ…စာရေး သူက အာနာပါန နဲ့ သမာဓိ ထူ ထောင်သူပါ.. ခနိက သမာဓိ သမားများအတွက် မဆိုလိုပါ..မိမိက ခနိကသမာဓိဖြင့် အားထုတ် သူဆို လျှင်တော့ မိမိ ဆရာသမားကို ပြန်မေး ကြည့်ပါ… ကြာကြာထိုင်လို့မရဘူး.. ကြာတယ် မကြာတယ်က အရေးမကြီးပါဘူး… အလေ့အကျင့်များလာရင် သူ့အလိုလို ထိုင်နိုင်လာပါလိမ့် မယ်… သမာဓိ ကို အရင် ရအောင် ထူထောင် နေချိန် မှာ ခြေထောက်ကျဥ်တာတို့ နာတာတို့ ကို ခဏ လျစ်လျူ ရှုထားပါ.. ဝိပသာနာ မရှု တက်သေး သူဆိုရင်ပေါ့… စိတ်ကလေးကို နှာသီးဖျား ကို မဲတင်း စိတ်စိုက် သတိ ကပ်နေ ရင်းနဲ့ ခြေကျဥ်တာ နာတာ စသော နာကျဥ်မှု ဝေဒနာ တွေ ကို သတိ မထား မိတော့ ပါဘူး.. ဒီတော့ နာတာကို သိနေသေးရင်၊ သတိထားမိနေသေးရင် သမာဓိ မရသေးလို့ပါပဲ လို့ပြောရပါမယ်.. သတိကို ခပ်ကြပ်ကြပ်ထားပြီး နှာသီးဖျား ကို စိတ်ပိုစိုက် ပါ လို့ပဲပြောလို့ရပါမယ်… နောက်ပိုင်း ကြာလာရင်တော့ ထိုင်နိုင်သွားပါလိမ့်မည်။
ဒီတော့ မထိုင် နိုင်လို့ ဒေါသ ဖြစ်တယ် အလို မကျ ဖြစ်နေ တယ် ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ သဘာဝ မကျ သလို ဖြစ်နေပါ သေးတယ်… ကောင်းတာပဲ အမြဲ လိုချင် နေတယ် ၊ မကောင်း တာတော့ မလို ချင်ဘူး ဆိုရင်လည်း သဘာဝ မကျ သေးပါဘူး.. တရား အားထုတ် ပါတယ်ဆို မှမတရား သလို ​ဖြစ်နေ ပါတယ်… အားထုတ်လိုက် တော့မှ ဒေါသက ပိုကြီး လာသလို ဖြစ်နေ ပါတယ်… ဒီတော့ စိတ်ကလေးကို အလိုက်သင့် နှလုံး သွင်းထားသင့်ပါတယ်… စာရေးသူ တရားမထိုင်ခင် နှလုံးသွင်းပုံ လေးဥပမာ ပြောပြ ပါမယ်..ငါစိတ်မဆိုးဘူးစိတ်ပြန့်လွင့်တာ သဘာဝပါဘာဖြစ်ဖြစ် သီးခံ မယ်..ယား လျှင် မကုတ် ဖူး…နာ လျှင် မပြင် ဘူး….သတိ သတိ သတိ နှုတ်ခမ်း ထိပ်…ငါ၏ စိတ်ကလေး နှုတ်ခမ်းထိပ်၌ တည်နေ စေရမယ် ငါ့စိတ်ကလေး ဤတထိုင် အတွင်း ဘယ်မှမပြန့် စေရစိတ်ကလေး အပြင်ထွက်သွားလျှင် နှုတ်ခမ်းထိပ်ဆီပြန်လာမည်.အထက်နှုတ်ခမ်း.. အထက် နှုတ်ခမ်း ..အဲ့ဒလို မထိုင်ခင် စိတ်ထဲမှ ရေရွတ် ပါသည်။စာရေးသူက အထက်နှုတ်ခမ်းမှာ စိတ်ကို စိုက်ထား ပါသည်။ ဤ နေရာ လေးတွင် စာရေးသူ အားကျ အတုယူ ခဲ့ဖူးသော ဖားအောက်ဆရာ တော် ဘုရားကြီး ၏ စကားတော် တခုပြောပြပါဦးမည်..ကွယ်တဲ့..တို့များ တရားအား ထုတ်ခဲ့စဥ် တုန်းကလေတဲ့ သတင်းစာတို့ ဘာတို့ ဖတ်ရင် စိတ်တွေ ပြန့်လို့ သတင်းစာမကြည့်တာ အနှစ် ၄၀ ကျော်ပါ ပြီ ကွယ် တဲ့…. ဒီ စကားလေး ကြား တော့ ကမ္မဌာန်း အားထုတ် မယ့် သူဟာ သမာဓိ ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေမယ့် အရာ အားလုံး ရှောင်သင့် တာပဲ ဆိုတာ သိသွား ခဲ့ပါ တယ်…။
ဒါ​ကြောင့် သမာဓိ မြန်မြန် တက်ချင်ရင် ပြင်သင့် တာပြင်ပါလို့… ဆိုတော့ကာ….တရားအား ထုတ်ခြင်း ရည်ရွယ် ချက်သည် စိတ်ချမ်း သာဖို့ ဆိုလျှင်ဖြင့် စာရေး သူကတော့ ယခုလို မြ င်မိပါ သည်လို့….စာရေး သူ ကိုယ်တွေ့ ဖြင့် ဖြေ ကြား ပေးလိုက် ပါသည်….မည်သည့် နည်း မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် အားထုတ် အားထုတ် စိတ်ချမ်း သာဖို့ လိုရင်းပါလို့..စာရေးသူ ယခု ဖြေကြား ချက်များ တွင် မဂ် တရား ဖိုလ် တရား စ သော အ ကြောင်း များ ကို မဆို လို ထား ပါ…သီလ နှင့် သမာဓိ အဆင့် လေးများကိုတောင် အတော် ဖြတ်ကျော် ရပါဦးမည်… ၎င်း အရာများကို ပိုင်နိုင် သွားပြီ ဆိုမှ ဖြင့် ကျန် အရာ များ သည် ကျွဲ ကူး ရေ ပါ ဖြစ် လာမည်မှာ မလွဲ ဧကန် မဟုတ် ပါပြီ လော… ပထမ အဆင့်ဖြစ်တဲ့ သီလ ကို လုံဖို့က လည်း တရားအားထုတ် မှသာ auto လုံ သီလ ဖြစ်ပါမည် မဟုတ်ပါလော..